Zvakanakira zvemagetsi zvekutengeserana uye zvakaipira eCommerce | ECommerce nhau
Eva maria Rodriguez | | eCommerce, Vatengesi
ari zvakanakira e-commerce ivo vakawandisa kwazvo zvichienzaniswa nekutengeserana kwechinyakare. Inopawo zvakawanda mikana yevatengesi kana vatengesi kwete kungova neyakawedzera yekutengesa chiteshi, asiwo kuvhura misika mitsva, kusimudzira zvigadzirwa zvavo uye kuwedzera mikana yavo yebhizinesi. Mupfungwa iyi, zvemagetsi zvekutengeserana mukwikwidzi mukana uye unonakidza kwazvo bhizinesi mukana.
El electronic commerce mutengi wekupedzisira (B2C) kuSpain ari kusangana ne kugona kukuru uye kuchine mikana yakawanda yekushandisa. Kunyangwe isu tisingakwanise kurasikirwa nenyaya yekuti pachine zvakawanda zvekuita, tanga bhizimusi repamhepo kana gadzirisa razvino, uchitora mukana kune ese eCommerce mikana.
1 Zvakanakira e-commerce
2 Kukanganisa kweCommerce
Vamwe ve zvakanakira e-commerce uchienzaniswa nekutengeserana kwechinyakare zvinotevera:
Kukunda kukwana kwenzvimbo.
Kuwana huwandu hukuru hwevatengi vese vari pamhepo uye pasiri pamhepo nekuda kwekuwedzera kuoneka kunobvumidzwa neInternet.
Yakanyanya yakaderera kutanga-up uye yekugadzirisa mutengo pane yetsika bhizinesi.
Hukuru kurerukirwa kwekuratidzira zvigadzirwa kune iye muzvinabhizimusi.
Zviri nyore uye nekukurumidza kuwana zvigadzirwa zvemutengi.
Kuchengetedza nguva kana uchiita kutenga kune mutengi.
Kugadziridza yenguva yakapihwa kune bhizinesi uye kune vatengi basa kune waunoshandira.
Kurerukirwa kwekushandisa uye kuvandudza chirongwa chekushambadzira chinoenderana nezvideredzwa, coupon, mijenya, nezvimwe.
Mukana wekupa rwakawanda ruzivo kumutengi.
Kurerukirwa kwekupa kuenzanisa pakati pezvigadzirwa, kusanganisira hunhu nemitengo.
Chokwadi pachave nezvakawanda zvakanakira e-commerce kubvira sezvo nguva inopfuura uye tekinoroji inochinja, kutenga pamhepo kuri kuwedzera kuverenga kwepamusoro muzana yekutenga kunoitwa nevashandisi.
Zvisinei, hatigoni kubatsira asi funga zvimwe kukanganisa kweCommerce izvo zvinofanirwa kutariswa usati watanga kana kuwedzera chero bhizinesi. Izvo zvinotevera:
Makwikwi aya akanyanya, nekuti chero munhu anogona kutanga e-commerce bhizinesi (zvirinani mune dzidziso).
Kuchine vatengi vazhinji vasingazeze kutenga vasina kuona chigadzirwa uye vasingavimbi nemitero yepamhepo.
Mari yekutumira inodhura kana bhizimusi vhoriyamu iri diki, uye uku ndiko kukanganisa kukuru kumabhizinesi madiki.
Kuvimbika kwevatengi kwakanyanya kuomarara uye kunoda zano rehunyanzvi.
Kusimudzira chitoro chepamhepo kunoda rimwe basa rako pachako pane kusimudzira chitoro padanho remugwagwa.
Kuchengetedzwa kwenzvimbo kunogona kupa varidzi vebhizinesi misoro yakawanda.
Haasi ese zvigadzirwa zvinogona kutengeswa pamhepo zvinowirirana zvakaenzana, uye zano rekushambadzira rinofanira kuongororwa zvakanyanya.
Vatengi vanoda kuva nazvo zvese: mutengo wakanakisa, sevhisi yepamusoro uye kutarisisa kwemunhu. Kukwikwidzana pane aya mazwi kuri kuwedzera kuomera kumakambani madiki achienzaniswa neakakura.
Muchidimbu, eCommerce mukana wakanaka, asi unokosha ongorora zvakanakira e-commerce nezvayakaipira kungovhura chete kana tichinyatsoita bhizimusi rakanaka. Kana iwe uchitsvaga mazano, heino yakanaka sarudzo ye email mienzaniso.
Inogona kufarira iwe - Mhedziso yeRipoti reElectronic Commerce muSpain (2013 edition)
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » Vatengesi » Zvakanakira nekuipira zvigadzirwa zvemagetsi
Chimwe chidimbu chakakosha cheruzivo chekutarisa kana uchitengesa kuburikidza neapuratifomu ndiwo mutengo.
Mune yedu blog isu takanyorawo chinyorwa nezve zvakanakira nekuipira ecommerce. Tinowirirana pane mamwe mapoinzi kwete pane mamwe.
miguel scale akadaro
Yakanaka chinyorwa, ini ndinofunga kuti kufambira mberi kukuru kwakaitwa mune epamhepo chitoro kusimudzira mapuratifomu, kunyangwe paine zvakawanda zvekuvandudza, kunyanya nevagadziri vemamodhi ekubhadhara. Kwaziso
Pindura kuna miguel escala
Nzira yekuwedzera sei kutengesa kwangu zviri nyore?
Camila, sekutsigira accounting kana pasina zvikwereti uye matikiti?
Yakanaka chinyorwa. Nyika inofanirwa kuenda kumamiriro egore uye kuramba ichivandudza Elektroniki Commerce
Maitiro ekuwana mukana wekukwikwidza mune diki eCommerce neBig Data